मनोनयमा परेका कलाकारको नजरमा कसले जित्छ अवार्ड ! « News of Nepal
मनोनयमा परेका कलाकारको नजरमा कसले जित्छ अवार्ड !
विधा : सर्वोत्कृष्टनवनिर्देशक
छेतेनले जित्नुहुन्छ कि !
फिल्म : चक्कर
सबै फिल्म मैले हेरेको छैन। त्यस कारण यसमा आइडिया भएन। तर, डमरुको डण्डीबियोबाट छेतन गुरुङले जित्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ।
आफैंले जित्छुजस्तो लाग्छ
फिल्म : जानी नजानी
मलाई त आफैंले जित्छुजस्तो लाग्छ नि ! मैले निर्देशन गरेको फिल्म राम्रो नभएको भए सायद नोमिनेसनमा पनि पर्दैनथ्यो होला।
मैले सिनेमालाई सिनेमा जस्तै बनाएको छु। फिल्म भनेको मनोरञ्जनका साथै सन्देश दिने हुनुपर्छ। मेरो फिल्ममा यी दुवै चिज छ।
आफंैले जिते हुन्थ्यो
फिल्म : कथा काठमाडौं
मलाई त आफंैले जिते हुन्थ्यो लाग्छ। किनभने नेपालमा त्यति धेरै फिमेल डिरेक्टर हुनुहुन्न। बढीमा ४÷५ जना हुनुहुन्छ। त्यसमाथि पनि मैले जुन स्क्रिप्टमा काम गरें, त्यसमा कमैले मात्र काम गरेका छन्।
यदि यस्तो फिल्मले अवार्ड पायो भने मेरा लागि मोटिभेसन हुन्छ। त्यो कुरा माइन्डमा राखेर जुरीले निर्णय गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
फिल्म : डमरुको डण्डीबियो
मेरो विचारमा सर्वोत्कृष्ट नवनिर्देशकको अवार्ड सम्राट शाक्यले जित्छ। किनभने उसले धेरै फिल्ममा काम गरेर अनुभव बटुलेको छ। फिल्म यात्रालाई उसले छुट्टै किसिमले प्रिजेन्ट गरेको छ।
आफ्नो कुरा गर्दा डमरुको डण्डीबियोमा मैले चाहेको जति काम देखाउन पाएको छैन। आफ्नो काममा चित्त नबुझेका कारण यो अवार्ड सम्राटले जित्छ भन्ने लाग्छ।
मेरो भोट डमरुको डण्डीबियोलाई
फिल्म : यात्रा (कथासहित)
मेरो विचारमा उत्कृष्ट नवनिर्देशक र कथाको अवार्ड डमरुको डण्डीबियोले जित्छ। किनभने डमरुको डण्डीबियो मौलिक कथामा बनेको फिल्म हो। अहिलेको युवाले मौलिकता बिर्सिरहेका हुन्छन्, जुन कुरा हामीलगायत आउने पुस्ताले पनि बुझ्न जरुरी छ।
त्यही विषय यो फिल्मले उठाएको छ। निर्माताहरू कमर्सियल फिल्ममा मात्र लगानी गरौं र लगानी उठाउँ भन्नेमा हुन्छन्। त्यसका बाबजुद डमरुको डण्डीबियो रिस्क लिएर निर्माण गरिएको फिल्म हो।
त्यस कारण निर्देशन र कथामा मेरो भोट डमरुको डण्डीबियोलाई। मेरो फिल्म कमजोर भएका कारण अर्को फिल्मको नाम लिएको होइन। यात्रा कमर्सियल फिल्म हो र डमरुको डण्डीबियो मौलिक फिल्म हो। यस्ता खालका फिल्म मलाई पनि मन पर्छ।
फिल्म ः छक्का पञ्जा–३
मेरो विचारमा यस वर्ष सर्वोत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड फिल्म प्रसादबाट नम्रता श्रेष्ठले जित्नहुन्छ। किनभने प्रसाद सधैं हेरेको फिल्मभन्दा फरक खालको फिल्म हो।
फिल्मले अडियन्सको रेस्पोन्स पनि भिन्न पाएको थियो। यस कारण नम्रता श्रेष्ठले पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
नम्रता श्रेष्ठले पाउनु पर्छ
फिल्म ः (भिलेन)
मेरो विचारमा यो क्याटोगोरीको अवार्ड प्रसादबाट नम्रता श्रेष्ठले पाउनुपर्छ। किनभने अहिलेसम्मकै फरक क्यारेक्टरमा काम गर्नुभएको छ उहाँले। अनि प्रसादको जुन क्यारेक्टर थियो, त्यसलाई एकदमै न्याय गर्नुभएको छ।
जुरीको डिसिजनलाई रेसपेक्ट गर्छु
फिल्म ः प्रसाद
सबैभन्दा पहिले नोमिनेसनका लागि थ्यांक्यु कामना अवार्ड तथा अर्गनाइजिङ टिम। म पनि एक नोमिनेटेड क्यान्डिडेट भएकाले अवार्ड कसले जित्छ होला भनेर मैले डिसाइड गर्न अलि नमिल्ला।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति जना नोमिनेसनमा पर्नुभएको छ, उहाँहरूले राम्रो काम गरेर नै नोमिनेसनमा पर्नुभएको हो। त्यस कारण पहिले नै सबै जना विजेता भइसक्नुभएको छ।
जसले राम्रो काम गरेको छ, उसले नै अवार्ड जितोस्। यो जुरीहरूले डिसाइड गर्ने कुरा हो। म सधंै जुरीको डिसिनजलाई रेस्पेक्ट गर्छु र गरिरहनेछु।
फिल्म ः रामकहानी
मेरो त अवार्ड पाउने समय पनि भएको छैन र मलाई आशा पनि छैन। अवार्ड जुरीको हातमा भएका कारण कसले अवार्ड पाउँछ भन्न सक्दिनँ।
कसरी भन्नु !
फिल्म ः साइँली
आफंै नोमिनेसनमा छु, कसरी भन्नु? जेन्युन र अनेस्ट पर्फमेन्सले अवार्ड जितोस् भन्ने कामना गर्छु।
विधा : सर्वोत्कृष्टनिर्देशक
जुरीमा डिपेन्ड हुन्छ
फिल्म : छक्का पञ्जा–३
अवार्ड जुरीको नजरमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। छक्का पञ्जा–३ ग्र्यान्ड कलेक्सन गरेको फिल्म हो भनेर सबैलाई थाहा छ। अवार्डले काम गर्ने हौसला बढ्छ।
सबैलाई आफैंले अवार्ड जिते हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। दर्शकले दिइसकेको अवार्डलाई जुरीले कसरी हेर्नुहुन्छ योपटक चाहिँ हेर्ने मन छ।
अनेस्टली भन्नुपर्दा म बाहिर भएका कारण सबै फिल्म हेर्न पाइनँ। तर, नोमिनेसनमा परेका सबै जना मलाई मन पर्ने निर्देशक हुनुहुन्छ। कामना फिल्म अवार्डमा फेयर जजमेन्ट हुन्छ।
यस कारण जुरीको निर्णय नै सर्वमान्य हुन्छ। बोबी त्यो बेलाको हिट फिल्म हो। रियल कथामा रियल जोडी लिएर बनेको फिल्मलाई दर्शकले पनि निकै मन पराउनुभएको थियो।
फिल्ममा मैले नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ, जुन सफल भयो। यो फिल्मबाट जित्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। जुरीहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, म फिल्मबाट आशावादी छु। तर, अवार्ड मैले नै पाउनुपर्छ भन्ने होइन। सबैलाई शुभकामना छ।
फिल्म ः साइँली (कथा र संवादसमेत)
मलाई यसबारे आइडिया भएन। त्यसैले मलाई थाहा छैन।
म राम्रै छु
फिल्म : नाइँ नभन्नु ल–५ (पटकथासहित)
निष्पक्ष ढंगले मूल्यांकन हुनेमा ढुक्क छु। किनभने कामनाजस्तो प्रतिष्ठित पत्रिकाले गरेको अवार्ड अहिलेसम्म विवादमा आएको छैन। मनोनयनमा पर्ने सबैले राम्रो काम गर्नुभएको छ।
जुरीले सूक्ष्म तरिकाले हेरेर अवार्ड प्रदान गर्नु नै हुनेछ। पटकथा विधामा पनि मनोनयनमा परेको रहेछु। यो विधामा राम्रै मान्छेले अवार्ड पाउनेमा ढुक्क छु। मैले नै अवार्ड पाए पनि म राम्रै छु।
अरूको फिल्म हेरेको छैन
फिल्म : प्रसाद
मैले उँहाहरूको फिल्म हेरेको छैन। अरू फिल्म नहेरीकन कसरी भन्ने? अवार्ड कसले पाउँछ त जुरीले डिसिजन गर्ने कुरा हो।
अवार्डले प्रेरणा मिल्छ
फिल्म : सयकडा दश (पटकथा र संवादसमेत)
कामना फिल्म अवार्डमा सयकडा दशबाट पटकथा, संवाद तथा निर्देशन विधाको लागि म पनि मनोनयनमा परेको जानकारी पाउँदा साहै्र खुसी लागेको छ।
मनोनयनमा पर्नुभएका सबै साथीलाई बधाई तथा अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। अवार्ड जसले प्राप्त गरे पनि नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई उद्योग बनाउन यो आयोजनाले सबै फिल्मकर्मी साथीहरूलाई अवश्य प्रेरणा मिल्नेछ। कार्यक्रम भव्य, सभ्य र निर्विवादरूपमा सम्पन्न होस्, शुभकामना।